Bulshada Archives - Sawirrotv
Tag Archive for: 'Bulshada'
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo Xariga ka Jaray Dhismaha Cusub ee Wasaaradda Waxbarashada (SAWIRRO)
Ra’iisul Wasaaraha dowladda Federaalka ee Soomaaliya Mudane, Xasan Cali Khayre ayaa Maanta xarigga ka jaray dhismaha Wasaaradda Waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta Sare oo dib-u- habeyn ballaaran lagu sameeyey, waxana uu kormeeray qeybaha xaruntaasi ay ka koobantahay, isla markaana la dar-daarmay shaqaalaha Wasaaradda. Munaasabadda furitaanka dhismaha Wasaaradda waxaa ka soo qeyb-galay wasiirro, Xildhibaano iyo marti sharaf …
Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur oo Maanta Cadeeyay Inuu Isaga Baxay Ururka Al Shabaab (SAWIRRO)
Afhayeenkii hore ee ururka Al Shabaab, Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur ayaa maanta si cad waxa uu u sheegay inuu ka baxay Ururka Al Shabaab, muddo laga joogo Shan Sano iyo Todobo bilood, uuna ku noolaa Gobolka Bakool. Ex Al Shabaab Roobow, oo sida muuqatay akhrinaayay warqad qoraal ah oo laga soo shaqeeyay, laguna qoray hadalo …
Banaanbax Balaaran oo Iminka ka Socda Magaalada Miuqdisho (SAWIRRO)
Waxaa hadda magaalada Muqdisho ka socda banaanbax ballaaran ay Wadayaasha Mootooyinka Bajaajta ay dhigayaan kaaso oo ay kaga cabanayaan dhibaatooyinka adag oo loogu gaysto wadooyinka Magaalada Muqdisho. Banaanbaxani ee ay wadaan wadayaasha Mootooyinka Bajaajka, ayaa wuxuu salka ku hayaa in loo diiday inay ka soo gudbaan wadada wadnaha ee Magaalada Muqdisho, horayna waxaa looga xiray …
Maxkamada Darajada Koowaad oo Xukuno Kala Duwan ku Riday Rag Katirsanaa Ururka Al Shabaab (SAWIRRO)
Maxkamada darajada 1-aad ee Ciidamada Qalabka sida ayaa maanta Xukuno isugu jira dil iyo Xabsi daa’in waxa ay ku riday sadex nin oo lagu helay inay katirsan yihiin ururka Al Shabaab kuwaasi oo gudaha Masaajid kuyaala magaalada Baydhabo ku dhax dilay nin Sheekh ahaa. Sadexdan nin ee Maxkamada darajada 1-aad mar kale xukunka ku riday …
South Africa: Muwaadin Soomaaliyeed oo Dab la Qabadsiiyay Goobtiisa Ganacsiga (SAWIRRO)
Waxaa Hebeenkii Isniinta soo galaysay lagu gubay Goobahooda ganacsiga oo ay ku dhinteen Alle u naxariiste labo muwaadin oo Soomaaliyeed kuwaasi oo Lagu kala magacaabijiray Cali Maxamuud Cali, Cabdullaahi Cali Ceymooy, waxaana weerarkani loo adeegsaday dhalooyin laga soo buuxiyay basiin ee loo yaqaano “molotovcocktai”. Sida lagu arkay muuqaalka kaaamero ku xerneyd goobta ganacsiga, booliskana uu …
Rag Ajaanib ah oo ay Gacanta ay ku soo Dhigeen Ciidamada Maamulka Jubbaland (SAWIRRO)
Ciidamada maamulka Jubbaland ayaa shalay galabnimadii waxa ay Magaalada Kismaayo ku soo bandhigeen 10 nin oo ajaaniib ah, kuwaasi oo si aan sharci ahayn kaga kalluumeysanayay Xeebaha Somaliya. Raggan, ayaa waxaa la sheegay in doonidii ay la socdeen ku soo caarisay Xeebta Kudhaa, oo hoos-tagga Degmada Badhaadhe, waxaana gacanta ku soo dhigay Ciidamada Jubbaland. Sideed …
Madaxweyne Farmaajo oo Maanta Faadumo Dayib u Magacaabay Xil Sare (SAWIRRO)
Faadumo Dayib oo mar ka mid noqotay Musharaxiintii Madaxweynaha Soomaaliya, balse markii dambe isaga hartay tartanka ayaa maanta waxaa loo magacaabay inay noqoto Madaxa Haweenka ee Hey’adda Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya. Faadumo ayaa Madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed C/llaahi Farmaajo kula kulantay Xarunta Madaxtooyada ee Villa Somalia, iyadoo ka mahad celisay qaabilaada iyo soo dhoweynta …